Isikhokelo esiKhawulezayo sokwenza iMithetho yeNqwelo yokuThenga kwi-Adobe Commerce (Magento) | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 22, 2022 NgoLwesibini, Februwari 22, 2022 Alex Khvoynitskaya
Ukudala amava okuthenga angahambelaniyo yeyona njongo iphambili yakhe nawuphi na umnini weshishini le-ecommerce. Ukusukela abathengi, abarhwebi bazisa iinzuzo ezahlukeneyo zokuthenga, ezifana nezaphulelo kunye nentengiso, ukwenza ukuthenga kwanelise ngakumbi. Enye yeendlela ezinokwenzeka zokufezekisa oku kukwenza imithetho yenqwelo yokuthenga.
Siqulunqe isikhokelo sokudala ukuthenga imithetho yenqwelo in Adobe Commerce (eyayisaziwa njengeMagento) ukukunceda wenze inkqubo yakho yesaphulelo isebenze ngaphandle komthungo.
Yeyiphi iMithetho yeNqwelo yokuThenga?
Imithetho yexabiso lenqwelo yokuthenga yimimiselo yolawulo ejongene nezaphulelo. Zingasetyenziswa emva kokungena ikhuphoni / ikhowudi yokunyusa. Umtyeleli wewebhusayithi ye-ecommerce uya kubona Sebenzisa Ikhuphoni iqhosha emva kokufaka iimveliso kwinqwelo yokuthenga kunye nexabiso lesaphulelo phantsi kwebha yexabiso eliphantsi.
Uza kuqala ngaphi?
Ukwenza okanye ukuhlela imigaqo yexabiso lenqwelo yokuthenga ngeMagento kulula kakhulu, ukuba uyazi ukuba ungaya phi kuqala.
Emva kokungena kwideshibhodi yakho yolawulo, fumana i Marketing ibha kwimenyu ethe nkqo.
Kwikona ephezulu ngasekhohlo, uya kubona i promotion iyunithi, ikhathalogu egqumayo kunye nemithetho yexabiso lenqwelo. Yiya kule yokugqibela.
Yongeza uMthetho omtsha weNqwelo
Thepha Yongeza uMthetho omtsha iqhosha kwaye ulungele ukugcwalisa ulwazi lwezaphulelo ezingundoqo kwiindawo ezimbalwa:
Lawula iiKhowudi zeKhuphoni.
Ukuzalisa ulwazi loMthetho
Apha uzakugcwalisa inani lebar zokuchwetheza.
Qala nge Umthetho Igama kwaye wongeze inkcazelo emfutshane ngayo. I inkcazelo intsimi iya kubonwa kuphela kwi-Admin page ukuba ungaxhaphazi abathengi ngeenkcukacha ezigqithisileyo kwaye uzigcinele ezo.
Yenza umthetho wexabiso lenqwelo ngokucofa iswitshi engezantsi.
Kwicandelo leWebhusayithi, kufuneka ufake i-website apho umthetho omtsha uya kwenziwa usebenze.
Emva koko iya ukhetho lwe Amaqela abathengi, ufanelekile kwisaphulelo. Khumbula ukuba ungancamathela ngokulula iqela labathengi abatsha ukuba awukwazi ukufumana ukhetho olufanelekileyo kwimenyu eyehlayo.
Ukugqibezela icandelo leKhuphoni
Ngelixa usenza imithetho yenqwelo yokuthenga eMagento, ungaya kuyo Akukho Ikhuphoni ukhetho okanye khetha i Ikhuphoni ethile ukuseta.
Gcwalisa Ukusetyenziswa ngoMthengi ngamnye intsimi, ichaza ukuba mangaphi amaxesha umthengi ofanayo angasebenzisa umgaqo.
Khetha imihla yokuqala kunye nokuphelelwa kwexesha lomgaqo ukunciphisa ixesha lokufumaneka kwethegi yexabiso eliphantsi
Faka ikhowudi yekhuphoni.
Faka amanani e Usebenzisa Ikhuphoni nganye kunye / okanye Ukusetyenziswa ngoMthengi ngamnye ukuqinisekisa ukuba umthetho awugqithwanga.
Enye inqaku omawuthathele ingqalelo kuyo lukhetho lwekhuphoni oluzenzekelayo, elenza kube lula ukwenza iikhowudi ezahlukeneyo zekhuphoni emva kokuzaliswa kwecandelo elongezelelweyo Lawula iiKhowudi zeKhuphoni ichazwe ngezantsi.
Ukumisela iMiqathango yoMgaqo
Kweli candelo lilandelayo, kufuneka ubeke iimeko ezisisiseko apho umgaqo uya kusetyenziswa khona. Ukuba ufuna ukuseta iimeko ezithile kwinqwelo yokuthenga, ungahlela i Ukuba zonke ezi meko ziyinyani isivakalisi ngokukhetha ezinye iinketho kuno zonke kunye / okanye oyinyaniso.
nqakraza i Khetha imeko ukongeza isithuba ukuze ubone imenyu yeengxelo zotsalo-phantsi. Kwimeko apho ingxelo yemeko enye ayonelanga, zive ukhululekile ukongeza kangangoko ufuna. Ukuba umgaqo kufuneka usetyenziswe kuzo zonke iimveliso, vele weqe inyathelo.
Ukuchaza Iintshukumo zoMthetho weNqwelo yokuThenga
Ngezenzo, imithetho yenqwelo yokuthenga eMagento ithetha uhlobo lwezibalo zesaphulelo. Umzekelo, ungakhetha phakathi kwePesenti yesaphulelo semveliso, iSaphulelo seXabiso esiZinzileyo, isixa esiZinzileyo isaphulelo sayo yonke inqwelo, okanye Thenga u-X ufumane i-Y eyahlukileyo.
Khetha ukhetho olufanelekileyo kwi Faka ithebhu yemenyu eyehlayo kwaye ufake isixa sesaphulelo kunye nenani leemveliso umthengi kufuneka azibeke enqwelweni ukusebenzisa umthetho wexabiso lenqwelo.
Utshintsho olulandelayo lunokwenza ukongeza isaphulelo nokuba kwitotali ephantsi okanye kwixabiso lokuthumela ngenqanawa.
Kushiyeke amabala amabini ngaphezulu.
The Lahla imigaqo elandelayo kuthetha ukuba eminye imithetho enesaphulelo esincinci iza kusetyenziswa okanye ayiyi kusetyenziswa kwiinqwelo zabathengi.
Ekugqibeleni, ungazalisa ifayile Conditions ithebhu ngokuchaza iimveliso ezithile ezisebenzayo kwisaphulelo okanye uyiyeke ivulekele ikhathalogu iphela.
IMithetho yexabiso leNqwelo yokuThenga yokuLeyibhela
Hlela Label icandelo ukuba ulawula ugcino lweelwimi ezininzi.
The Label icandelo lifanelekile kwabo baqhuba ivenkile yorhwebo ngeelwimi ezininzi kuba ivumela ukubonisa okubhaliweyo kweleyibhile kwiilwimi ezahlukeneyo. Ukuba ivenkile yakho ibhalwe ngolwimi olunye okanye awufuni kuzihlupha ngokungenisa imibhalo yeleyibhile eyahlukeneyo kwimboniselo nganye, kufuneka ukhethe ukubonisa ileyibhile engagqibekanga.
Kodwa ukusebenzisa ulwimi olunye kuyinyani yokwenyani, ukunciphisa umda womxhasi kunye nokunciphisa inqanaba lokuthenga kwabo kwi-Intanethi. Ke ukuba i-ecommerce yakho ayilunganga ulwimi okwangoku, thatha ixesha lakho ukwenza izilungiso. Kwaye emva koko wenze ileyibhile yomgaqo njengereferensi yoguqulo.
Malunga noLawulo lweeKhowudi zeKhuphoni
Ukuba uthatha isigqibo sokwenza ikhowudi yekhuphoni isebenze ngokuzenzekelayo, kuya kufuneka wongeze ezinye iinkcukacha zekhuphoni ezithe ngqo kweli candelo. Faka ubuninzi bekhuphoni, ubude, ifomathi, izimaphambili zekhowudi/izimamva, kunye nodwi kwiithebhu ezifanelekileyo kwaye ucofe iqhosha Gcina umthetho iqhosha.
Sivuyisana nawe, uwugqibile umsebenzi.
ICEBISO: Nje ukuba wenze umthetho wenqwelo enye, ungenza ezinye ezimbalwa ukwenza izaphulelo zakho zibe zezemntu ngakumbi. Ukukwazi ukuzulazula kuzo, ungahluza imithetho ngaphandle kwamakholomu, uyihlele, okanye ujonge ngokulula ulwazi lomgaqo.
Imithetho yenqwelo yokuthenga yenye ye-Adobe Commerce's Magento 2 iimpawu oko kuya kukunceda wenze lula izibonelelo kubathengi bakho ngaphandle kokubhala umgca wekhowudi. Ngokulandela la manyathelo achazwe ngasentla, uya kukwazi ukwenza ivenkile yakho ye-ecommerce ilunge ngakumbi kwiimfuno zabathengi ezihlala zinyuka, ukutsala abathengi abatsha ngokusasaza iikhowudi zekhuphoni phakathi kwabaphembeleli be-niche kunye nokuphucula isicwangciso sakho sokuthengisa ngokubanzi.
tags: urhwebo lwe-adobeIlifu lorhwebo lwe-adobeIkhuphoni yorhwebo ye-adobeAdobe Commerce coupon rule izenzoimithetho yekhuphoni yorhwebo lwe-adobeI-adobe ye-adobe yentengiso yexabiso lentengo yezenzo zexabisoImithetho yexabiso lexabiso lentengo ye-adobe yorhwebosebenzisa ikhuphoniinqwelo ixabiso imithethokwenziwa kanjaniimithetho yenqwelo yokuthenga yemagentaMagentomagento 2 iimpawuikhuphoni yemagentomagento coupon rule izenzomagento coupon ulawulo iimekoimithetho yekhuphoni yemagentoukulawula ukubanda kwekhuphoni ye-adobeimithetho yenqwelo yokuthenga
UVal Kelmuts liGosa eliyiNtloko lesiGqeba kunye noMseki we Staylime, uyilo lwe-ecommerce kunye nenkampani yophuhliso ekomkhulu eRedwood City, eCalifornia. Uneminyaka eyi-10 yamava kuphuhliso lwesoftware yesiko, ulawulo lokuthengisa, kunye nophuhliso lweshishini. UVal yingcali evunyiweyo yentengiso ye-Adobe Commerce, Shopify ingcali eqinisekisiweyo yeshishini, kunye nelungu le-PMI.
Ngaba iiParameters ze-UTM kwi-imeyile zisebenza njani kunye namaPhulo oHlalutyi kaGoogle?